Shina dia nitifitra orinasa mpamokatra Blaster - Puhua
Home > Products > Voatifitra Blaster
Shot Blaster dia mandray an'io fomba io mba hahazoana fipoahana amin'ny medium (vy voatifitra na vy grit) amin'ny hafainganam-pandeha avo sy zoro iray amin'ny sehatry ny sangan'asa, ity haino aman-jery voapoaka ity dia afaka manadio ny sehatry ny sangan'asa, ary avy eo ao anaty masinina ilay mpanelanelana ary ny loto dia haverina amin'ny alalàn'ny rivotra madio kokoa ary azo ampiasaina indray.
Ny fanamboarana blaster fitifirana anay dia asa tsotra sy mora, tsy mila mihidy lalana ho an'ny fananganana, ambany ny vidin'ny fanamboarana, manana fivezivezena be ny fitaovana. Ny masinina dia manana fitaovana fanesorana vovoka, mandritra ny fanamboarana azy, tsy azo atao vovoka sy tany maloto, tsy misy loto izany, ary azo haverina indray ny fitaovana.
Machine Shot Blasting Machine Ny fiasan'ny fiparitahan'ny arabe an-dalambe indray mandeha dia ho maina tsara ny laitance vita amin'ny beton ary manala ny loto, ary afaka manao fitsaboana volo eo ambonin'ny simenitra, manao ny haben'ny fizarana azy tsara, manatsara ny tanjaky ny tantera-drano. sosona sy sosona fototra vita amin'ny beton, mba hahafahan'ilay sosona tsy tantera-drano sy ny tokotanin'ny tetezana mifangaro tsara kokoa, ary miaraka amin'izay dia afaka miharihary tanteraka ny triatra amin'ny beton, misy ny vokan'ny nip ao amin'ny tsimoka.
Masinina fanapoahana tifitra amin'ny gorodona
ny masinina mipetaka amin'ny gorodona dia mampiasa an'io fomba io mba hahatonga azy ireo hipoaka amin'ny medium (vy voatifitra na vy grit) amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra sy zoro iray amin'ny sehatry ny workpiece, ity haino aman-jery voapoaka ity dia afaka manadio ny sehatry ny sangan'asa, ary avy eo ao anaty masinina ny salantsalany sy ny fahalotoana dia haverina amin'ny alalàn'ny rivotra madio kokoa ary azo ampiasaina indray.
Ny milina fanapoahana gorodona
ny milina fanapoahana gorodona dia manadio ny arabe sy ny takelaka vy ary ampiasaina amin'ny làlana, tetezana, tranobe ary anti-fananganana hafa ary fikarohana manokana sy fampandrosoana ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana.
Milina fanapoahana basy vita amin'ny beton
milina fanapoahana tifitra vita amin'ny beton apetraka amin'ny fanadiovana ny arabe dia manapoaka ny pilina eny ambonin'ny arabe amin'ny hafainganam-pandeha sy ny zoro amin'ny alàlan'ny fomba milina, manao pills misy fiantraikany amin'ny tampon'ny arabe ary mahatonga ny fahasarotan'ny lalana, hahatratra ny vokatry ny fanesorana residuum, Mandritra izany fotoana izany, ny mpanangona vovoka dia hamokatra tsindry ratsy hanamboarana pilina sy loto ary vovoka vovoka aorian'ny fanadiovana ny rivotra, ny pilina tsy simba dia haverina ho azy ampiasaina ary ny fahalotoana sy ny vovoka dia hidina ao anaty boaty fanangonana vovoka.
Easy-Maintainable Voatifitra Blaster dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Voatifitra Blaster dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Voatifitra Blaster miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.